XOG: SHAN Arrimood Oo Aanad Ka Ogeyn Mucjisada Erling Haaland, Xaqa Uu U Leeyahay U Ciyaarista Qaranka England Iyo Kooxda Ingiriiska Ee Koobka La Doonayo - Gool24.Net
XOG: SHAN Arrimood Oo Aanad Ka Ogeyn Mucjisada Erling Haaland, Xaqa Uu U Leeyahay U Ciyaarista Qaranka England Iyo Kooxda Ingiriiska Ee Koobka La Doonayo
March 23, 2020 Abdiwahab A. Abeye
Da’yarka ay bishii January heshiiska la gashay ee Erling Haaland, waxa uu dunida kaga yaabsaday gool dhalin mucjiso oo kale ah oo uu si xidhiidh ah kulan walba shabaqa saaxiib ula noqday bilihii tegay, waxaana iyadoo ay da’diisu tahay 19 sannadood oo kaliya uu durba samaystay rikoodho layaab leh oo dhinaca goolasha ah oo ay xattaa awoodi kari waayeen inay halyeeyo waaweyn gaadhaan.
Laacibkan reer Norway, waxa uu marxaladdii hormooyinka ee Champions League xili ciyaareedkan usoo ciyaaray naadiga Red Bull Salzburg oo uu usoo dhaliyey siddeed gool afar ciyaarood oo kaliya oo uu ugu soo bilowday kooxda reer Austria. Kaliya sidan kama uu samaynin tartanka Yurub, balse waxa uu layaab ku riday difaacyahannada horyaalka dalkaas ee Austrian Bundesliga, kuwaas oo xili ciyaareed aan xattaa badhtamihii gaadhin uu ka dhaliyey 16 gool.
Kooxo badan ayaa saxeexiisa ku tartamay bishii January, waxaana ku guuleysatay Borussia Dortmund oo isla markii uu ku biirayba uu si layaab leh ula qabsaday, waxaanu ugu bilaabay saddexlay ciyaartiisii ugu horreysay, taas oo ku qaadatay kaliya 23 daqiiqadood. Rikoodhkan oo aanay jirin cid uga horreysay abid horyaalka Bundesliga, waxa kulankiisii labaadna uu shabaqa taabsiiyey laba gool iyadoo kaliya uu beddel kusoo galay qaybtii labaad. Waxa markaas rikoodhka loo geliyey shan gool oo Bundesliga ah iyo 56 daqiiqadood oo kaliya oo uu ciyaaray.
Tijaabadiisii xigtay oo ahayd tan ugu weyn, waxay ahayd kulankii ay Dortmund ku martigelisay PSG ee lugta hore ee wareegga 16-ka Champions League, waqti badanna kuma qaadanin inuu mar kale isku qoro taariikhda, iyadoo uu laba gool ku dhaliyay siddeed daqiiqadood oo kaliya. Laakiin nasiib darro, lugtii labaad ayaa kooxdiisa lagu garaacay magaalada Paris oo lagaga reebay tartanka Champions League, iyadoo Haaland naf ahaantiisana ay ka kala go’een goolashii xidhiidhka ahaa
Qormadan, waxa aanu idiinku soo gudbinaynaa shan arrimood oo muhiim ah oo laga yaabo in aanad ka ogeyn laacibkan da’da yar ee Erling Haaland, oo ka mid ah xiddigaha la saadaalinayo inay dunida wacdaraha ka dhigi doonaan sannadaha soo socda.
5. Hal ciyaar kaliya ayuu dhaliyey 9 gool
Haaland oo farihiisa ku tilmaamaya tirada 9-ka gool ee uu dhaliyey
Mishiinka gool-dhalinta ee qarnigan inuu yahay waxa loo qoray markii uu sagaal gool dhaliyey ciyaar xulkiisa Norway uu ka hor tegay waddanka Honduras oo ku dhamaatay 12-0, waxaana uu Haaland dhaliyey 9 ka mid ah goolasha waddankiisa.
Ciyaartan oo dhacday sannadkii hore, waxa iskaga hor yimid qaramada ay da’doodu ka hoosayso 20 jirrada, taas oo ahayd ciyaar ka tirsan koobka adduunka da’yarta U-20 ee sannadkii hore lagu qabtay wadanka Poland
Goolashan, waxa uu Haaland ku dhaafay rikoodhkii gool-dhalinta kulanka kaliya ee uu haystay halyeyga reer Brazil ee Adailton oo lix gool ka dhaliyey ciyaar sannadkii 1997-kii dhex-martay Brazil iyo Japan oo ku dhamaatay 10-3.
Waqtigan, waxa Erling Haaland loo aqoonsan yahay ciyaartoyga goolashii ugu badnaa ka dhaliyey hal kulan oo caalami ah taariikhda casriga ah, taas oo aan la ogeyn haddii mustaqbalka uu soo bixi karo ciyaartoy jabin karaya rikoodhkiisan.